Showing १-१० of २,२४६ items.
खोटाङ फुटबल एकेडेमीको अध्यक्षमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि नूरकाजी सैँजू चयन भएका छन् । एकेडेमीको शनिबार सम्पन्न प्रथम साधारणसभा तथा जिल्ला अधिवेशनबाट उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सभाहलमा भएको प्रथम साधारणसभा तथा अधिवेशनले सैँजूको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ । एकेडेमीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भीम राई, उपाध्यक्षमा भीषण राई, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, महासचिवमा शैलेन्द्र बजिमय, सचिवमा श्याम पौडेल र कोषाध्यक्षमा रोशेष श्रेष्ठ चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा रसा प्रदान, सुचन राई, रोशन राई, अशोक
प्रधानमन्त्री शेरबाहदुर देउवाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)को नवनिर्वाचित टोलीलाई आज बधाई दिँदै कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङसहितको निर्वाचित टोलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले फुटबल खेलको विकासको लागि सरकारले सदैव सहयोग गर्ने बताए । यही असार ६ गते भएको एन्फाको निर्वाचनमा नेम्वाङ चार वर्षका लागि एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित हुने अन्य टोलीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षमा दावा लामा, दी
प्रदेशस्तरीय बास्केटबल र पौडि प्रतियोगिता हुने
विराटनगर । १ नं. प्रदेश स्तरीय बास्केटबल र पौडी प्रतियोगिता हुने भएको छ । विराटनगरस्थित एभरेष्ट कलेजमा बास्केटबल र पौडी प्रतियोगिता हुने भएको हो ।कलेज परिसरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि असार १७ गते बास्केटबल र असार २४ गते पौडी प्रतियोगिता हुने जानकारी गराएको छ । बास्केटबलमा प्रदेशभरीका १२ वटा कलेजले भाग लिने विराटनगर बास्केटबल एकेडेमीका अध्यक्ष सरोज लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विराटनगरको एभरेष्ट, बिकेभिएम, डानबक्सको, सगरमाथा कलेजले भाग लिनेछन् यस्तै मोरङको सुुन्दरहरैचाको ब्राइट फियुचर, इटहरीको हिमशिखिर स्कुल, धरानको होलिल्याण्ड इन्टरनेशनल, चिल्डे«न एकाडेमी, नवज्योती स्कुलगायतले भाग लिने
धरान बास्केटबल संघ र सुनसरी बास्केटबल संघको आयोजनामा भइरहेको ट्यालेण्ट हण्टका सहभागी बिद्यार्थी खेलाडिहरुका लागि सियोन स्कुलले टि–सर्ट सहयोग प्रदान गरेको छ ।कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी सियोन स्कुलका अध्यक्ष खड्क बहादुर मगरले प्रशिक्षण क्यामपका मुख्य प्रशिक्षक बिकाश चाम्लिङ राई र उनका सहयोगी प्रशिक्षक हेमन्त राई , युगल लिम्ब, डा।आशा राई र दिवस राइलाइ सयुक्त रुपमा ट-सर्ट प्रदान गरेका थिए ।धरान १२ स्थित चतारालाईनमा रहेको धरान मेघा कलेजको बास्केटबल कोर्टमा असार ५ देखि एसईई परिक्षा दिएर बसेका बिद्यार्थीहरुलाइ लक्षित गरि बास्केटबल ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ । बास्केटबल
धनकुटा । धनकुटामा हालै सम्पन्न भएको अन्तरपालिका स्तरीय सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ स्मृति महिला फुटबल प्रतियोगिताको आयोजक संस्थाले खर्च सार्वजनिक गरेको छ ।	सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान धनकुटाले जेष्ठ २८ गते देखी असार १ गतेसम्म सञ्चालन गरेको अन्तरपालिका स्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिताको बुधवार आयोजकले खर्च सार्वजनिक गरेको हो । प्रतियोगितामा ५ लाख, ११ हजार, १ सय ३७ आम्दानी भएको र ४ लाख, ४४ हजार, ५ सय, ७५ हजार खर्च भएको प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष रेजिना पालिखेले पत्रकार सम्मेलनमा वताईन । प्रतियोगिताको आय–व्यय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रतिष्ठानका अध्
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा पहिलो पटक आयोजित खुला ‘प्रथम राष्ट्रिय काँक्रेविहार हाफ म्याराथन’ प्रतियोगितामा बाग्लुङका तीर्थकुमार पुन प्रथम भएका छन् । आज बिहान सुर्खेत वीरेन्द्रचोकबाट सुरु भई मङ्गलगढी चोक हुँदै सुब्बाकुना, बुलबुले, चाइना पुल, बाङ्गेसिमल, खोर्केखोला हुँदै पुनः वीरेन्द्र चोकसम्मको २१ किलोमिटर १०० मिटर दूरी एक घण्टा नौ मिनेट १५ सेकेन्डमा पार गरेर पुन प्रथम भएका थिए । त्यस्तै, एक घण्टा नौ मिनेट २४ सेकेण्डमा सो दूरी पार गरेर राजन रोकाय द्वितीय र एक घण्टा १० मिनेटमा ११ सेकेन्डमा सो दूरी पार गरी जुम्लाका चिने बुढा तृतीय भएकाे कर्णाली खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव
धरान । विराटनगरको मोतीराम स्पोर्टिङ क्लबले प्रदेश एक जिल्लास्तरीय नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । सुनसरीको इटहरी रंगशालामा बुधबार सम्पन्न फाइनलमा धनकुटाको देउराली फुटबल क्लबलाई २–१ गोलअन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको हो । उपाधिसँगै नगद २ लाख रुपैयाँ जितेको छ । यता देउरालीले नगद १ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ । जितका लागि मोतीरामका दिवाकर चौधरी र उमेश कार्कीले एक–एक गोल गरे । यता सान्तवना गोल देउरालीका तर्फबाट सञ्जय रम्तेलले गरे । प्रतियोगितामा मोतीरामका उमेश कार्की उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । उनले नगद ५ हजार १ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाए । प्रतियोगितामा मोतीरामका शुशील राई फाइनल ख
धरान । अन्तरनगरपालिकास्तरीय सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ स्मृति महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि धनकुटा नगरपालिकाको टिमले जितेको छ । धनकुटामा शनिबारदेखि जारी प्रतियोगितामा धनकुटाको टिमले चौबिसे गाउँपालिकाको टिमलाई ३–० गोलले हराउँदै उपाधि जितेको हो । उपाधि रक्षा गरेको धनकुटाले नगद ५० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी पाएको छ । उपविजेता बनेको चौबिसेले नगद ३० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी पायो । खेलको वुमन अफ दी म्याच धनकुटाकी अनिता लम्जेल घोषित भइन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी धनकुटाकी तीर्था लिम्बू घोषित भइन् । प्रतियोगितामा धनकुटाका सातवटै स्थानीय तहको टिम सहभागी बनेको थियो ।
३,३४८ पटक पढिएको
धनकुटा, सहिदभूमि र चौबिसे सेमीमा
धनकुटा । धनकुटामा शनिबारदेखि सुरु भएको अन्तरपालिकास्तरीय सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ स्मृति महिला फुटबल प्रतियोगीतामा धनकुटा, चौबिसे र सहिदभूमि गाउँपालिकाको फुटबल टिम सेमिफाइनलमा पुगेको छ । सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान धनकुटाले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको दोस्रो दिनको पहिलो खेलमा सहिदभूमि गाउँपालिकाले साँगुरीगढी गाउँपालिकाको फुटबल टिमलाई १–० गोलले पराजित गरेको छ । दोस्रो खेलमा चौबिसे गाउँपालिकाले पाख्रीवास नगरपालिकालाई १–० गोलले हराएको छ । शनिबारको उद्घाटन खेलमा धनकुटा नगरपालिकाको फुटबल टिमले महालक्ष्मी नगरपालिका फुटबल टिमलाई ८–० गोलले हराउँदै सेमिफाइलनमा पुगेको हो । सोमबार (आज) पहिलो सेमि
एएफसी एसियन कप छनोट: नेपाल जोर्डनसँग पराजित
एएफसी एसियन कप, २०२३ छनोटको तेस्रो चरणअन्तर्गत समूह ‘ए’ को खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित भएको छ । कुवेतको जबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा जोर्डनले नेपाललाई २–० गोल अन्तरले हराएको हो ।खेलको पहिलो हाफमा नेपाल र जोर्डनले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए । दोस्रो हाफमा भने जोर्डनले दुई गोल ग¥यो । पहिलो हाफको ४३औँ मिनेटमा नेपालका गोलकिपर दीप कार्कीले जोर्डनका मौसा मोहमद सुलेमानको पेनाल्टी बचाउन सफल भएका थिए । उनले जोर्डनसँगको खेलमा डेब्यु गरेका हुन । गौतम श्रेष्ठले जोर्डनका मोहमद फैजललाई पेनाल्टी बक्सभित्र लडाएपछि पेनाल्टी पाएको हो । दोस्रो हाफमा जोर्डनका लागि अली ओल्वान र हाम्जा अल दारदौरले ए
८,४४० पटक पढिएको